Zvikonzero zvitatu zvekuhaya PR Firm | Martech Zone
Mune basa rangu paFormstack , ane online fomu anovaka, rimwe remabasa angu nderekudyidzana nehukama neruzhinji (PR) uye kunyanya kufukidzwa kwenhau, iyo inotyaira kufambiswa uye inotyaira kutengesa.
Kuve neruzivo zvese padanho nemutengi divi ndinonzwisisa chii a yakanaka Ruzhinji Rwehukama yakasimba inogona kuitira sangano. Heano zvikonzero zvitatu, kubva pane zvakaitika kwandiri, nei mabhizinesi, uye kunyanya mabhizinesi madiki, achifanira kuhaya yekunze PR agency.
Hauna Nguva Yekuita PR: PR haisi spigot iwe yaunogona kuvhura uye kudzima. Kunge mamwe mabasa ekushambadzira, anowirirana, akarongeka, uye anoyerwa PR chimwe chinhu chinoda kurongerwa nekuitwa kwenguva yakareba. Kungofanana iwe usingakwanise kubatidza SEO, PR chimwe chinhu chinongowedzera kusimba paunenge uchiisa simba mukati mayo.
Kuwedzeredza Kutanga: Mazhinji mabhizinesi anonzwisisa kukosha kwekutanga kwechigadzirwa chitsva kana sevhisi pakubudirira kwebhizinesi rako. PR yakawandisa pane kungonyora kuburitswa uye kuiisa pamusoro pevhisi sevhisi. Kuva nemudiwa wako anokwanisa kuwedzera hukama hwevezvenhau, vezvenhau, zviitiko, mikana yekupa mubairo uye zvimwe zviitiko zvine hukama nePR pamwe chete nekusunungurwa kukuru zvinogona kukupa gumbo kumusoro paunotanga chigadzirwa chako. Asi ingo rangarira, sekutaura kwandataura mune poindi 1. PR haisi chinhu chekubatidza uye kudzima Kana iwe ukaronga kushandisa imwe yekunze agency kune yako kuvhura iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe une system irimo kana iko kuvhura kwapera kusvika ramba uine simba rese uye nekumhanyisa kwawakavaka. Chinhu chakaipisisa chingaitwe nekambani kuvhura chigadzirwa hombe, kuve nePR hombe, uye kupera kunze kwekuwedzera izvo iwe nesangano rako zvamakapedza mwedzi muchigadzira.
Kuvandudza Chigadzirwa kana Sevhisi: Dzimwe nguva kunyangwe akanakisa emumba maP mavens anogona kupererwa nemazano akanaka. Sezvinoitwa mune re-brand kana webhusaiti redo inounza yekunze agency kumutsidzira PR yako inogona kubhadhara mibairo mikuru. Vakanaka maPR masangano vanoziva kutarisa chigadzirwa, sevhisi, kana kambani uye voona chimwe chinhu chitsva - chimwe chinhu chinokodzera. Chinhu chaunofunga chakafa kana kuneta chinogona kukurumidza kuendeswa kumusika mutsva kana kuburitsa nyowani uye nekukurumidza kuwana makumbo. Kushandisa PR yakasimba iyo inogona kukurumidza kufonera avo vokukurukura uye kuyedza mazano matsva kunogona kumuka kuhupenyu chiri kupera chigadzirwa kana bhizinesi. Rangarira zvakadaro, kunyangwe PR yakanakisa haigone kumutsidzira chigadzirwa chiri kufa, ita shuwa kuti pane chimwe chinhu chiripo uye uve akatendeseka nesangano rako nezvezvakakunda zvakapfuura nekutadza kuitira kuti vakwanise kupa nzira kwayo.
Uye sebhonasi pano ndechimwezve chikonzero chekuhaya agency yekunze.
4. Iwe Uri Mumusika Wakaungana: Mabhizimusi madiki ari kuyedza kukwikwidza mumisika mikuru, yakasimbiswa, kana yakazara vanhu vanogona kuona zvimwe zvakanaka kubva mukuhaya yekunze PR agency. Sangano rakanaka richakwanisa kugadzira zano iro inotarisa kusimba rekambani yako uye kusiyanisa izvo zvinoita kuti iwe umire. Kazhinji kacho agency inogona kukubatsira iwe kupaza ruzha uye kusvika pamusika waunoda nekukurumidza.
Izvi hazvisi izvo chete zvikonzero nei sangano richifanira kuhaya PR agency asi izvi zvimwe zvezvikonzero zvandakaona kubva kune mutengi uye agency maonero ekuhaya kunze kwePR rubatsiro.
Tags: blastmediaprhukama hwevanhu
Sep 22, 2009 pa 2: 20 AM
PR mafemu anoshamisa. Asi iwe unofanirwa kunyatsonzwisisa PR usati watevera aya mapoka.
Tarisa uone ichi chinyorwa: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Uye tarisa ino yakanaka vhidhiyo:
Sep 22, 2009 na12: 27 PM
Zvese zvakanaka mapoinzi. Mabhizimusi mazhinji madiki haana mari yekuita izvi. Asi sezvawakaita pamusoro,
kuedza kunofanirwa kuenderana, kuronga, uye kuyerwa.
Izvi zvakafananawo kushambadza. Ndinoona mabhizinesi madiki achizviita kashoma uye achinyunyuta kuti kushambadza hakushande.
Kana bhizinesi rikasarudza kuzviita vega, kiyi haisi kudzima spigot. Sekutsvaira kwaunoita kapeti dzako zuva nezuva, kutsvaira migwagwa pamberi pechitoro chako, ichi chinhu chinoda kutariswa nguva dzese.
Gumiguru 28, 2009 pa 2:33 AM
Ndiyo chaiyo mari yakanaka yaunogona kushandisa kuti uwane zvakakomba nezvekutengesa kwako. Unogona kubhururuka uchitenderera uchitevera mikana nguva dzese, asi kazhinji hauna bhajeti yekuviga zvese zvinobudirira. Tsvaga masimba ako uye uwane zano chairo uye uvake kubva ipapo. Chinyorwa chakanaka
Zvita 20, 2011 na12: 44 PM
Iwe une mamwe makuru mapoinzi pano - yakanaka posvo!
Jan 10, 2012 pa 8: 13 AM
Ndinofunga ndinogona kubvumirana naChris wese uyu. Chimwe chikonzero ndechekuudzwa, 'kwete' kana iwe uine zano rakaipa. Kana iwe uri wehunyanzvi PR agency yakazvimiririra zvakakwana inozogona kutaura kana ichifunga imwe yemafungiro ako isiri kuzoshanda uye inofanirwa kushinga zvakakwana kukuudza.
Ini ndinofunga zvinopera pasina kutaura kuti ivo vanofanirwa kuve vanogadzira zvakakwana kuti vauye nemazano ivo pachavo!
Gumiguru 5, 2017 na2: 23 PM
Zvinonakidza kudzidza kuti kana zvasvika kune bhizinesi riri kuda kuhaya yeruzhinji hukama femu kuti pane mabhenefiti anogona kubva kwavari vachishandisa rimwe. Ini ndinoda matauriro aunoita kuti izvi zvichavabatsira kuwedzera kuvhurwa kwebhizinesi ravo kana chero chigadzirwa chitsva chavari kuda kutengesa. Ichi chinhu chavanofanira kuchengeta mundangariro kuitira kuti vakwanise kuve nevamwe vekushanda pamwe nevezvenhau nenzira dzese.